We.com.mm - လူကြိုက်များပေမယ့် ဒီသောက်စရာ (၃) မျိုးက ဝက်ခြံထွက်စေတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား
ကိုယ်အရမ်းကြိုက်တဲ့ အစားအစာတွေကပဲ ကိုယ့်အလှကိုပျက်စေတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? “မသိဘူး။ ဆက်စားမှာပဲ” လား။ ကိုယ်ကြိုက်တာကို မစားရဘူးဆိုတာလည်း ဆင်းရဲခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။ ဒီတော့ စားပါ။ သောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် limit လေးတစ်ခုထားပြီး စားပေါ့နော်။ ဘယ်အရာမဆို တန်ရင်ဆေး လွန်ရင်ဘေးပဲလေ။ သင်က ဝက်ခြံမဟားဒရားထွက်တတ်တဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ဒီအစားအစာတွေ ရှောင်ပေါ့နော်။ လောလောလတ်လတ် ဝက်ခြံတွေ ထွက်နေတယ်ဆိုရင်လည်း ဝက်ခြံပျောက်သွားတဲ့အထိ ခဏရှောင်လိုက်ပါ။
နွားနို့တွေ၊ သကြားတွေ အများကြီးပါဝင်တဲ့ ကော်ဖီကို လူအများစု ကြိုက်ကြပါတယ်။ နို့မှာ ကြီးထွားဟော်မုန်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ နို့သောက်လို့ ခန္ဓာကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးနိုင်သလို၊ ဝက်ခြံတွေကိုလည်း ကြီးထွားစေတယ်ဆိုတာ သိထားပါ။ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေဟာ ဆားဝက်ခြံထွက်စေပြီး ချွေးပေါက်ပိတ်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဝက်ခြံတွေကိုလည်း ပိုမို ရောင်ရမ်းစေပါတယ်။
“ဒါဆို နို့မထည့်ဘူးကွာ။ ကော်ဖီချည်းပဲ သောက်မယ်” ဆိုရင်ရော? ကော်ဖီချည်းပဲသောက်ရင်တော့ ကောင်းပေမယ့် ပမာဏများရင်လည်း မကောင်းပါဘူး။ ကဖင်းဓာတ်အများကြီး သုံးစွဲတဲ့အခါ စိတ်ဖိအား ပိုဖြစ်လာပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အခါ ဝက်ခြံထွက်တတ်တာကိုတော့ သိကြမှာပါ။ ဒါကြောင့် ကော်ဖီအစား Green Tea, Black Tea, White Tea တွေကို သောက်လို့ရပါတယ်။
ကော့တေးကို ဘာနဲ့လုပ်ပါသလဲ? အရက်၊ juice၊ သကာရည် တွေနဲ့ လုပ်ထားတာပါ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် အဲဒီ (၃)မျိုးလုံးက ကျန်းမာရေးအတွက် မသင့်လျော်ပါဘူး။ သကာရည်နဲ့ juiceက အချိုဆိုတော့ ဝက်ခြံထွက်စေတယ်ဆိုတာ ပြောစရာတောင် မလိုပါဘူး။ အရက်ကလည်း အသားအရေအတွက် အဆိပ်ပါပဲ။ အရက်က အသားအရေကို ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်စေတယ်၊ ဝက်ခြံထွက်စေတယ်၊ အရေးအကြောင်းဖြစ်စေတယ်၊ ဟော်မုန်းတွေ ဖောက်ပြားစေတယ်၊ အသားအရေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို သေစေတယ်။ ဒါကြောင့် သကြား၊ Juice နဲ့အရက်တွေကို ရှောင်ပါ။ အဲဒီသုံးမျိုးပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ကော့တေးကိုတော့ ပိုရှောင်သင့်ပါတယ်။
Diet အတွက် သစ်သီးတွေ ဖျော်ပြီးသောက်နေတာတွေက တကယ်တော့ ကျန်းမာရေးအတွက် သိပ်မကောင်းလှပါဘူး။ လတ်ဆတ်တဲ့အသီးကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ခွဲစားတာက ကောင်းပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်တွေကို ပေးနိုင်ပြီး အသားအရေအတွက်လည်း အကျိုးပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသီးကနေ အရည်ဖြစ်အောင် Blender နဲ့ချေမွပစ်လိုက်တဲ့အခါ ထင်သလောက် မကောင်းတော့ပါဘူး။
အသီးကို ကြိတ်လိုက်တဲ့အခါ အသီးရဲ့အမျှင်ဓာတ်တွေ ပျက်စီးသွားပြီး အာဟာရဓာတ်တွေလည်း ပြိုကွဲသွားပါတယ်။ ဗီတာမင်ဓာတ်တွေကလည်း အလျင်အမြန်ထွက်လာပြီး အသီးဖြစ်တုံးကလောက် မလတ်ဆတ်တော့ပါဘူး။ ကုန်တိုက်တွေမှာရောင်းတဲ့ Ready Made အသီးဖျော်ရည်ဗူးတွေဆို ပိုဆိုးပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အသီးအရည်တွေဟာ အကျိုးပြုဓာတ်တွေ ကုန်ဆုံးသွားပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ပမာဏပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်ခါစားရင် ငှက်ပျောသီးကို ၂လုံးလောက်ပဲ စားနိုင်မယ် ဆိုပါစို့။ အရည်အဖြစ် ကြိတ်လိုက်တဲ့အခါ ၃ လုံး ၄ လုံးလောက် ဖြစ်သွားပါမယ်။ ဒါဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်၊ ဗီတာမင်ဓာတ် ပမာဏထက် များသွားပါပြီ။ လိုအပ်တာထက်အာဟာရဓာတ်တွေ များတာလည်း မကောင်းပါဘူး။ မလိုအပ်တဲ့အဆီတွေတတ်လာမယ်၊ အချိုဓာတ်တွေ ကိန်းအောင်းလာမယ်၊ အသားအရေကို ပျက်စီးစေပြီး ဝက်ခြံတွေလည်း ထွက်လာစေပါတယ်။
ခံတွင်းတွေ့စေမယ့် ဝက်ခြေထောက်ကြံမဆိုင်ဟင်း ချက်စားကြမယ်
Yummy လက်ဖက်ရည်ဖျော်စပ်နည်း (၅)မျိုး
ကိုရီးယားစတိုင် ခရမ်းသီးပေါင်း စပ်စပ်လေး လုပ်စားကြမယ်